musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Mukadzi weTanzania Kufamba Nyeredzi Anofara ari Kumusoro
Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Sustainability News • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Nyeredzi yekufamba Zainab Ansell
Muzvare Zainab Ansell, mukwikwidzi ane mukurumbira wekushanya, akadomwa pakati pevakuru veTanzania vakaita zvakanaka pakati pevezera ravo mukambani ye COVID-19.
Mme Ansell vakabuda semukadzi chete mutungamiriri mune echirume inotonga mabhiriyoni emadhora emadhora indasitiri pane irwo mazita e100 anoshanda kwazvo maTanzania mu2021.
Akazivikanwa nekambani yekutarisira, Eastern Star Consulting Group Tanzania.
Vakuru vePamusoro 100 vachazivikanwa muna Gumiguru 8, nekutamba chinzvimbo chakakosha mukugonesa hupfumi hwenyika kuti hudzokere shure kwekukonzeresa kwedambudziko re COVID-19.
"Ms. Zainab Ansell ndemumwe wevakuru vakuru vechikadzi vemunguva yedu. Akabudirira kubata bhizinesi rake kuburikidza nemadutu eiyo COVID-19 denda; anofanirwa kukwiridzirwa, ”akadaro mukuru weEastern Star Consulting Group Tanzania, VaAllex Shayo.
Iwo maTop 100 Vatungamiriri Mipiro vanotsvaga kucherechedza nekupemberera vamwe vatungamiriri, kukoshesa yavo yakasarudzika mipiro kuhupfumi hwenyika, kukurudzira hunyanzvi, uye kugadzirisa mashandiro ese epasirese nyika.
Chokwadi, Tanzania yakavhiringidzwa nekudonha kwehupfumi, nekuda kwechisimba chine coronavirus iyo yakasimudzira huwandu hukuru hwemabhizimusi kuvhara zvitoro, ichityaira mamirioni avanhu muhurombo. Asi sezvazvinoitika, Mai Zainab vakauya nemapakeji akasiyanasiyana ekutsvagisa vashanyi vepamba, pamwe musika wemhandara wakanganikwa, kuti kambani yavo irarame pakatarisana nedambudziko rakakomba reCOVID-19. Hutsvaidzo hwake uye bhizinesi rezvemabhizimusi rakachengetedza rakachengetedza mabasa ari mupenyu uye akarwisa shanduko yemamiriro ekunze, pamwe nekusimudzira nekukanganisa mazana evakadzi vakasarudzika munharaunda dzekushanyirwa dzinogara muTanzania.
Mme Zainab ndiye muvambi uye CEO weTanzania-based Zara Kuratidzwa, yakavambwa uye yakagadzwa muna1986 mudunhu reMoshi, Kilimanjaro, uye iye asina murume ari kunetsekana kugadzirisa kusarongeka kwenhoroondo kwakawedzerwa nekudzvinyirirwa nekushungurudzwa kwevakadzi munharaunda yeMaasai yekuchamhembe kweTanzania.
Iye anozivikanwa nekuvandudza fafitera rakakosha rekubatsira vakadzi vanotambura vechiMaasai mukuda kwake kuvasunungura kubva muhurombo, neruremekedzo rwezvisungo zvinokuvadza zvetsika dzavo dzechivanhu, nekuvapa mari yekuvatenga kutenga zvigadzirwa zvekugadzira machira nemhizha uye kutengesa zvigadzirwa. kuvashanyi.
Kuburikidza nenzvimbo yake yekusimudzira vakadzi, mazana emadzimai emaMaasai vanobatsirwa neindasitiri yekushanya, sezvo ichivapa mukana wekuratidzira nekutengesa zvinhu zvakagadzirwa nemaoko munzira dzinoenda kunzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi muTanzania. Iyi danho rakura kuita mbiru yakasimba yevakadzi uye ino nharaunda inomirira vazhinji.
Muna 2009, kambani yakaparura Zara Charity, ichidzosera kunharaunda dzakadzvanywa muTanzania uye kuita tsoka dzayo mukufamba kwepasirese kwekusimudzira kusimudzira kwekushanya. Chipo ichi chinotaura nezvehutano, dzidzo, kushaya mabasa, uye matambudziko evakadzi nevana. Zara yakakanganisa zviuru zvehupenyu muTanzania, ichishandisa vanhu chiuru nemazana mana negumi nekusingaperi uye mwaka, ichichengetedza zviuru zvemhuri munyika ine huwandu hwakanyanya hwekushaya mabasa.
Zara yakave ichizivikanwa zvakanyanya nekuda kwekuyedza kwayo kusimudzira Sustainable Tourism Development mu Africa, neZainab ichihwina mibairo mizhinji, yawana mibairo inopfuura gumi nematanhatu yemuno neyekunze. Pakati pawo panosanganisira World Travel Market (WTM) Humanitarian Award uye Bhizinesi Muzvinabhizimusi weMubairo wegore (13), iconic Tourism yeThe future Awards (2012), uye African Travel Top 2015 Vakadzi. Muzvare Zainab vakazivikanwa nekupihwa mubairo wekuva Vakadzi Vakakurumbira muBhizinesi neHurumende na CEO Global nekubudirira kwavo muEast Africa Tourism uye Leisure Sector 100/2018 panguva ye CEO GLOBAL Pan African Awards, uye Tanzania National Parks yakazivawo Zara Kuratidzwa seEast Africa nyika yakanakisa yeOrgan Operator (2019).
Iyo Tanzania Association ye Vashandi veVashanyi (TATO) CEO, VaSirili Akko, vakati mubatanidzwa wavo unodada neZara Tours muvambi uye CEO nemoyo wake worupo wekutsigira vanotambura.
Stanley kwai anoti:
Svondo 30, 2021 pa 04: 53
Amai Zara vanofanirwa kuhwina..vanga vachibatsira nharaunda nenzira dzakasiyana
Svondo 29, 2021 pa 14: 23
Alice Ephata anoti:
Svondo 29, 2021 pa 13: 15
Zara Tours ndiko Kufuridzirwa kune nyika ye Tourism. Zvisinei nedambudziko redenda iye akaramba akasimudza musoro wake, mukadzi akasimba uye ane simba.
Amai Zainab vakakodzera kukunda mumakwikwi Hombe ndinoreva Huru !!!
Hery Choga anoti:
Svondo 29, 2021 pa 13: 06
Makorokoto mazhinji kwamuri amai, munokodzera izvi. Tinotenda chaizvo zvamunoedza kuita.
Svondo 29, 2021 pa 12: 58
Kana amai ava vasiri ivo vanokunda, Hameno kuti ndiani futi. Vhotera amai Zara nhasi uye murege iye afuridzire zvakanyanya Nyika rose💫. Amai Zara kuNyika💫💫💫
Maisha k. Francis anoti:
Svondo 29, 2021 pa 09: 28
Ndepapi pauri kutaura nezveZara kushanya, iwe unotaura nezve hombe uye inoshamisa kambani yekushanya mu tanzania uye iyo yese easter Africa. Zainabu Ansell semaneja maneja mukadzi akasimba uye ane simba. zvirokwazvo, akakodzera kukunda mumakwikwi
Inno Mtui anoti:
Svondo 29, 2021 pa 08: 14
Kunyangwe hosha iyi akakwanisa kupa basa kune Vanotungamira Guides, vaumbi uye mamwe mabasa mazhinji. Makorokoto kuna Amai Zara
Svondo 29, 2021 pa 08: 11
Iye ave achitsigira kwazvo nharaunda yakatenderedza nharaunda dzake dzese. Anonyatsokodzera kuve pamusoro
Zakiah chomboo anoti:
Svondo 29, 2021 pa 06: 53
Zainab Ansell anofanira kuhwina mumakwikwi nekuti iyo campany yakanaka kwazvo Zara kushanya kunobatsirawo rubatsiro